China 5inch Car Polisher Polishing Machine 8mm Auto Wax Buffer DF8A mpanamboatra sy mpamatsy | Checheng
Item TSY: CHE-DF8A
Ny mpampanonta ny milina DF8A dia novolavolaina manokana ho an'ny antsipirihany, ity polisera DA maivana sy matanjaka ity, mety ho ilay mpampaka sary roa fampidirana tonga lafatra. Izy io dia matanjaka ampy ho an'ny matihanina nefa azo antoka ho an'ny vao manomboka. Afaka mahazo vokatra tsy misy kilema ianao raha tsy miasa mafy. Natao hampiasaina miaraka amin'ny takela-by roa miampy 3 "(75mm) sy 5" (125mm), toy izany koa ny lanjany mifanohitra amin'ny lanjan'ny orinasa ka mandoko sy mandanjalanja tsara. Miaraka amin'ny takelaka miverina 5inch, dia azo ampiasaina amin'ny asa antsipirihany isan'andro izy io, ary azo ampiasaina amin'ny famolavolana ireo izay sarotra tratrarina amin'ny faritra misy pad 3inch hafa. Izy io dia manana motera 900W azo itokisana izay manome azy fahaiza-manao tena tsara handray ny tsindry ary manala ireo kilema haingana kokoa. Ny fifehezana hafainganam-pandeha dia manome hafainganam-pandeha miovaova avy amin'ny 2500 ka hatramin'ny 6500 OPM, izay manala ny marika sy ny tadiny ary haingana sy azo antoka.
1 pcs 3in lovia tohana, 1pc 5in vilia tohana,
1pc wrench, 1pc L-wrench, boky 1pc,
1pc D-Handle, borosy karbaona 1pr, visy 1pc + mpanasa lamba
Previous: Farany 5inch Electric Rotary Car buffer Polishing Machine CHE-C6866
Manaraka: 3inch 12mm Orbital Sander Mini Variable Speed ​​Dual Action Car Buffer Polisher DF12A